I-37 EPHOLILEYO ENGAQHAWULWANGA KUNQUNYULWA KWEENWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Ukuqhawulwa kweenwele ezingasasebenziyo zaMadoda
Ukubukeka okuthe tye kunye nesitayile, i-undercut enqanyuliweyo yeyamadoda afanelekileyo. I-haircut ye-undercut enqanyuliweyo iye yaba yindoda ethandwayo yokucheba iinwele iminyaka ngoku. Kupholile okwangoku,…
Ukubukeka okuthe tye kunye nesitayile, i-undercut enqanyuliweyo yeyamadoda afanelekileyo. I-haircut ye-undercut enqanyuliweyo iye yaba yindoda ethandwayo yokucheba iinwele iminyaka ngoku. Epholileyo kwaye yeyala maxesha, iinwele zangaphantsi ezinqanyuliweyo zinokuguquguquka ngokwaneleyo ukuba zisebenze ngeenwele ezimfutshane, eziphakathi nezide. Ngapha koko, amadoda angasidibanisa isitayile kunye ukubuna , ikama ngaphezulu , icala elinzima , yeka, Phezulu kwezityalo , pompadour okanye iinwele ezibuyile umva .
Ngeentlobo ezininzi ezahlukeneyo, kubalulekile ukuba ufumane ukunqunyulwa kweenwele oza kuzithanda. Nazi ezona ndlela zincinci zinqanyuliweyo zamadoda afuna iinwele ezipholileyo ezinamacala amafutshane kunye neenwele ezinde ngaphezulu.
1Yintoni i-Undercut eqhawulweyo?
3Uyifumana njani i-Undercut
4Uyenza njani indlela yokuCwangcisa i-Undercut engaQhawulwanga
5Eyona ndlela icocekileyo yokuQhawula iiNwele
7Inxalenye Engasasebenziyo Yecala Elinzima
9Ukuqhawulwa kwe-Undercut Fade
10Spiky Qhawulwa Fade
Shumi elinanyeFringe Undercut
12Ukuqhawulwa kwe-Undercut engaqhawulwanga kunye nePompadour
13I-Brush Up Undercut
Shumi elinantlanuIPompadour Undercut
16Ukuqhawulwa koQeqeshiso olunqanyuliweyo kunye neenwele eziMhluziweyo
17I-Fringe nge-Undercut engaQhawulwanga kunye neMilo ePhakamileyo
18I-Undercut eneenwele ezisecaleni kunye neendevu ezixineneyo
19Ukuqhawulwa koQeqesho olunqanyuliweyo kunye neHard Part Comb Over
Amashumi amabiniIzinwele eziMiselweyo eziMiselweyo eziPhawulwe nge-Undercut
amashumi amabini ananyeNgaphantsi kweTextured
22I-Undercut kunye ne-Long Combed ngaphezulu kweenwele kunye neendevu
2. 3Long Slick Back Undercut kunye neendevu
24Ukuqhawulwa kweenwele okungacinywanga kunye neenwele ezisecaleni
25I-Undercut engaQhawukwanga kwi-Undercut kunye neFaux Hawk
26Ukuqhawulwa kweComb Over
27Fade Undercut kunye noMdibaniso wePompadour
29Imveli yokuQhawulwa koQeqesho oluPheleyo
Yintoni i-Undercut eqhawulweyo?
Iinwele ezingaphantsi zamadoda ngamacala amafutshane na acocekileyo, uhlobo oluphezulu lokucheba iinwele. Ihlala idityaniswa nentshebe ukwenza isitayile se-hipster, iinwele zibonakalise ukuba zithandwa ngenxa yolondolozo lwayo olulula kunye nokusebenza ngokuchaseneyo.
I-undercut enqanyuliweyo ichazwa ziinwele ezinde entloko, ijikelezwe ngamacala aphelileyo okanye achetyiweyo. Umahluko ocacileyo phakathi kweenwele ezithandekayo ezinjenge-quiff phezulu kunye nokucandwa kwamacala yinto enika isitayile uphawu lwaso olungasasebenziyo.
Ngelixa i-undercut ekhululwe kwiklasikhi ingenantshintsho ukusuka kumacala amafutshane ukuya kwi-floppy yeenwele ezinde ngaphezulu, umahluko obizwa ngokuba yi-faded undercut unika ukubukeka okupholileyo okungagqithisi kangako.
Kwi-undercut ecekethekileyo, amacala amafutshane ngokuthe ngcembe aya esiba made njengoko esondela ngentla kwentloko, esenza i-hairstyle ebumbeneyo ngaphandle kokwahlulahlula phakathi komphezulu namacala.
Ukuba uyayithanda i-undercut kodwa usebenza e-ofisini yobungcali engayi kuvumela ukunqunyulwa kweenwele, ngokuqinisekileyo unokufumana i-undercut Conservative faded.
Okokugqibela, i-undercut yeenwele zezinwele ezimfutshane ezipholileyo zamadoda afuna ukubonakala kunomdla kwaye kuhambelana.
Uyifumana njani i-Undercut
Ukukhulisa iinwele zakho kunyanzelekile ngaphambi kokuba ucele i-undercut ye-hairstyle evela kwi-barber yakho. Ubude beenwele ubuncinci beesentimitha ezimbini kufanelekile ukufezekisa ukungaqhagamshelwa okuphezulu. Isitayile siya kusebenza nakweyiphi na ingqokelela okanye ubukhulu beenwele ezinde kunee-intshi ezimbini.
Ngelixa ushiya icandelo eliphezulu libotshelelwe umva kwaye kude nezisiki, amacala entloko achetyiwe okanye ulusu luphelile. Ukusondela kokucheba okanye ukutshabalala kuphelele kukhetho lomntu, kwaye i-undercut fade yinto elungileyo kwabo bangafuniyo umahluko omkhulu.
Olunye ukhetho lweenwele ezingasasebenziyo kukushiya ubude ngasemva kwentloko, ukwenza ukubukeka kube mnandi kwaye kungadibani.
iinwele ezinde ezinamacala achetyiweyo
Ukuba awuqinisekanga malunga nokuba yeyiphi i-haircut ye-undercut ekulungeleyo, qala ngeenwele ezinde emacaleni (ukuseta i-clipper # 4) kwaye ngokuthe ngcembe uhambe mfutshane (ukuseta i-clipper # 1 okanye # 0) ukuze uqiniseke ukuba awugqithisi.
Uyenza njani indlela yokuCwangcisa i-Undercut engaQhawulwanga
Xa uthatha isigqibo sendlela yokuhombisa i-undercut, elona candelo lide leenwele ngaphezulu kwentloko linokwahlulwa okanye lidityaniswe kwelinye icala okanye livuselelwe ukunika uluhlu lweembonakalo ezahlukeneyo. Kulungiselelwe abo baneenwele ezinde, inokuthi ibotshelelwe emva kwi-bun okanye kwi-ponytail. Okokugqibela, unokuthatha isigqibo sokuziqaba nje iinwele zakho ukuze ubuye umva.
Ngokuqinisekileyo zininzi iindlela ezahlukeneyo zokwenza isitayile kwi-undercut enqanyuliweyo, ke zive ukhululekile ukuzama iindlela ezahlukeneyo zokuhombisa iinwele kunye nokubukeka.
Ukongeza ivolumu kunye nokuthungwa kwezinto ezinqanyuliweyo, nazi iingcebiso ezimbalwa:
Hlamba iinwele zakho kwaye wome ngetawuli.
Ukongeza ivolumu, yibethe yome ngasemva kwentloko yakho.
Yongeza inani eligciniweyo le-pomade okanye i-wax kwizinwele zakho kwaye uthambise de kube yenziwa inwele yakho.
Ukulungiselela iinwele ezisesikweni ezishushu zangaphantsi, dibanisa iinwele zakho. Ngaphandle koko, faka iinwele zakho kwelinye icala ukuze udibanise ikhephu ngaphezulu kwembonakalo.
Eyona ndlela icocekileyo yokuQhawula iiNwele
I-undercut enqanyuliweyo yamadoda yizinwele eziguqukayo ezinokubhalwa ngeendlela ezininzi. Ukufumana oko kusebenza kweenwele zakho kungathatha uvavanyo oluncinci, kodwa nge-undercut, unenwele enokunxitywa eofisini, imihla yesidlo sangokuhlwa okanye umdlalo webhola ekhatywayo.
Ukuphefumlelwa ngendlela yokunxiba i-undercut enqanyuliweyo, siye saqulunqa igalari eyoyikekayo yokunqunyulwa kweenwele ezingaphantsi. Jonga le mifanekiso ngaphambi kotyelelo lwakho olulandelayo kwindawo yokucheba iinwele!
Inxalenye Engasasebenziyo Yecala Elinzima
Ukuqhawulwa kwe-Undercut Fade
Spiky Qhawulwa Fade
Ukuqhawulwa kwe-Undercut engaqhawulwanga kunye nePompadour
I-Brush Up Undercut
Ukuqhawulwa koQeqeshiso olunqanyuliweyo kunye neenwele eziMhluziweyo
I-Fringe nge-Undercut engaQhawulwanga kunye neMilo ePhakamileyo
I-Undercut eneenwele ezisecaleni kunye neendevu ezixineneyo
Ukuqhawulwa koQeqesho olunqanyuliweyo kunye neHard Part Comb Over
Izinwele eziMiselweyo eziMiselweyo eziPhawulwe nge-Undercut
I-Undercut kunye ne-Long Combed ngaphezulu kweenwele kunye neendevu
Long Slick Back Undercut kunye neendevu
Ukuqhawulwa kweenwele okungacinywanga kunye neenwele ezisecaleni
I-Undercut engaQhawukwanga kwi-Undercut kunye neFaux Hawk
Ukuqhawulwa kweComb Over
Fade Undercut kunye noMdibaniso wePompadour
Imveli yokuQhawulwa koQeqesho oluPheleyo
amadoda ukucheba ngeendevu
iinwele zamadoda aseAsia
yintoni uphawu lwam lwelanga nenyanga
uphawu lokunyuka kwenyanga
uphawu lwelanga kunye nophawu lwenyanga
zac efron iinwele ezinde